Soo dejisan Adobe Reader 11.0.10 – Windows – Vessoft
Adobe Reader – software caan ah si aad u eegto oo aad daabacan waraaqaha PDF ah. software waxa uu leeyahay muuqaalada si ay nuqul, u aragto qaababka, maareeyaan images iyo ciyaaro ka kooban warbaahinta of files PDF ah. Adobe Reader taageertaa nooc kasta oo document ee format la siiyey. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah qalab ku darto qoritaan ay u walxaha PDF ah. Sidoo kale Adobe Reader falgala Adobe daruur kaydinta, kaas oo bixiya in files ah helitaanka fudud loo eegin meesha ay ku yaalaan.
Taageerada oo dhan nooc oo dokumentiyo PDF
Views iyo daabacayaa faylasha PDF
Ku darista ee qoritaan gaaban
Extension for daalacashada
Microsoft Visual C++ Redistributable 2013, 2012, 2010, 2008 iyo 2005
English, Français, Deutsch, 中文... Minecraft 1.8.9
English, Français, Deutsch, 中文... Xfire 2.44.761